माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा यो वर्ष उच्च नतिजा ‘ए प्लस’ ल्याउनेको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा बढेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। बिहीवार प्रकाशित नतिजा अनुसार कुल १७ हजार पाँच सय ८० जना विद्यार्थी ‘ए प्लस’ श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका बताइएको छ। यो सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा तीन हजारले बढी हो। यो वर्ष पहिलो पटक सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत एसईई भएको हो। कुल परीक्षार्थी चार लाख ७५ हजार तीन जना रहेको कार्यालयले बताएको छ। त्यसमध्ये छात्राको सङ्ख्या छात्रहरूको सङ्ख्याभन्दा केही बढी छ।
कसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा?
एसईईको नतिजा विभिन्न वेबसाइट र मोबाइल सन्देश एसएमएसबाट हेर्न सकिन्छ। शिक्षासम्बन्धी सरकारी निकायहरूका निम्न वेबसाइटहरूमा हेर्न सकिन्छ: त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले विगतमा झै आफ्नो वेबसाइटमा एसईईको नतिजा राख्ने बताएको छ। नेपाल टेलिकमकै १६०० मा फोन गरेर दिइएको निर्देश अनुसारको आफ्नो नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ। एसएमएसबाट भने १६०० मा अङ्ग्रेजीमा एसईई र सिम्बोल नम्बर पठाएर नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ग्रेडिङ र प्रादेशिक शिक्षा प्रणालीमा गएपछि विगतमा जस्तो चासो नभएको भनिए पनि आम नागरिकमा एसईईको नतिजाप्रतिको आकर्षण कायम नै छ। सामाजिक सञ्जालहरूले धेरैले एसईई नतिजाका लिएर टिप्पणी गर्ने र आफ्नो बेलाको परीक्षा एवम् नतिजा सम्झने गरेका छन्।
करिश्माले ल्याइन् थ्री जीपीए (बि प्लस)
पुरानो एसएलसीको रिजल्ट सुन्ने बानी परेकाहरु एसईईको नतिजा आयो भन्नासाथ प्रश्न गर्छन्- यस वर्ष कतिजना पास भएछन् ? अनि कति विद्यार्थी फेल भएछन् ? तर, ग्रेडिङ सिस्टमले एसएलसी वालाहरुको पुरानो प्रश्नको सहज जवाफ दिँदैन । अर्थात यो प्रणालीमा विद्यार्थीलाई सीधै फेल भएको मानिँदैन । उनीहरु ग्रेडिङमा कम हुन सक्छन् । तर, ग्रेड सी वा सोभन्दा कम नम्बर प्राप्त गर्नेहरुले पूरक ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिन पाउँछन् ।